WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray,Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray,Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray,Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
04/04/2017	290 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME
Waasugow (ayuu Warsame yiri asagoo hadalka shigshigaya caro daraaddeed) sideedaba aan kuu warrammee, dadkoo dhammi wuxuu quuri la’yahay kartida iyo maskaxda Ilaahey siiyay soomaalida oo aan cid ku gaarta la helayn, laakiin, waxaa la yiri:
Hadalkaas qiimaha leh ee Warsame ku raagay, Waasuge wuxuu ku xusuustay Gabaygii Sallaan Carrabay oo ku saabsanaa inayan jirin wax ka xumaan badan qof aan libintaada kuu qirin. yirina:
“Dumarkuba xubnaha foosha way, xanaf wareeraane
Bal inay xasuus daran yihiin, waxow xaqiiqdiiya
Xanuunkii markii hore qabsaday, xaylka kale mooge
Waxba yuusan xeerkay i marin, xoolana i siinin
Xaasha e nin libin iga xistiyay, xumihii waa yaabe.”
Alle la kala baryi og, erayna la kala dhihi og. Sidaas darteen ayuu Warsame yiri “Soomaalida laguma gaaro hadal iyo murtidiis”. Waasuge inakastoo uu hadalkiisa ka xumaa uma jawaabin Dirir, maxaa yeelay, wuxuu ku xushmeynayey Warsame, aqoon horana kama dhaxayn labadooda. Waasuge wuxuu door biday inuu sheekadii Maariya ku saabsanayd halkeedii kasii billaabo, wuxuuna yiri, “Warsamow, wali makuu sheegay inay Maariya maalin dhoweyd anigoon iska jirin weesada iga jabisay”. Waasuge waa culimo la jir wuxuuna ka war hayaa inaysan weeso ka jabin Gabadha wiilkiisu qabaa. Wuxuuse haddana qabaa in umuurta Maariya ay sidaas ka duwantahay.
Dirir ayaa is yiri duqa shakiga ka saar oo yiri “Waasugow waxay ila tahay inayan Maariya weeso kaa jebin. Waasuge ayaa hadalkii si lama filaan ah u qaatay oo si tannaago ah u yiri “Dirirow ma waxaad i leedahay Maariya iyo gabar soomaaliyeed yaa….. yaaa…ayaa haddii Ilaah kuu roonyahay, inkastoo wiilkaygu qabo…haddana… yaa… ! sow halaad garatay maaha?. intuu gacmaha had ba gees u taagayey, ayaa Waasuge ushii ka dhacday. Markuu inta rogmaday ushii soo qaado is yirina, wuxuu dhiniciisa ka arkay Nin haybad culimo ka muuqato oo hareed guduudan leh. Cimaamad ayaa ninka madaxa ugu duuban, gacantana wuxuu ku sitaa baakoorad iyo tusbax gaaban. Waasuge wuxuu is yiri Alleylahe haddaad mas’aladii Sheekh u heshay, wuxuuna talo ku dhammaystay inuu wax ka weydiiyo xaajaday Dirir ku murmeen. Haddaba maxaa dhacay?. Ninkii Waasuge Sheekha u haystay ayaa inta yara kululaaday cimaamaddii madaxa ugu duubnayd iska furay oo dibbadda soo dhigay cirro jeegaxiir ah. Intaa kuma ekeysane xabad Sigaar ahna wuu shitay. Waasuge wuu arkayaa waxaas oo dhan. Asagoo la yaabban siduu ugu sirmi tegay, niyaddana iska leh ‘ Reer magaalku sheekh la mood badanaa’!. Waasuge wuxuu umuurtaas ku xusuustay ninkii horay u yiri, “ haddaad magaalo tagto waxaad arkaysa:
La soco Qeybta 16-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Dad masaakiin ah oo u gacan-galay Shabaab- (faah-faahin)
Next: Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo Deyniile lagu weeraray